Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Israel oo saddex Falastiiniyiin ah ku dilay Qasa.
Ciidamada Israel oo saddex Falastiiniyiin ah ku dilay Qasa.
Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas ee dhulka Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israel ay toogasho ku dileen saddex Falastiiniyiin ah oo ka qayb qaadanayey mudaharaad ballaadhan oo lagaga soo horjeedo gidaarka Israel. Mudaharaadkani waxa la dhigayey Jimcihii shanaad oo xidhiidh ah.
Qofkii ugu horeeyey ee dhimashadiisa la xaqiijiyaa waxa uu haa Cabdulsalaam Bakar oo 29 jir ah, waxaanay wasaaradda caafimaadka maamulka Xamaas ee Qasa sheegtay in ay ciidamada Israel madaxa kaga toogteen bariga magaalada Qasa.
Israel ayaa sheegtay in boqolaal qof oo mudaharaadaya ay isku dayeen in ay gubaan gidaarka dhagaxaan iyo bambooyin laga sameeyey quraarado baatrool ku jira na ay tuurayeen. Waxaanay intaa ku dartay in ciidankeedu adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa, rasaasta rabadhka ah iyo mid nool ba.
Laakiin Israel ayaa waxay sheegtay in ay shacabkeeda ka ilaalinaysay isku dayyada mitidiin doonayey in ay gidaarka soo dhaafaan. Waxay sidoo kale ku eedaysay ururka mitidka ah ee Xamaas ee gacanta ku haya Qasa in uu caruur la’xaad la’ iyo waxa ay ku tilmaantay dhaawac been ah u adeegsanayo eedayn colaadeed.